“ပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင် အကြံဥာဏ်လေးတစ်ခု တောင်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု” - Cele Connections
ကာရိုက်တာတိုင်းကို စိတ်နှစ်ကာ သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ မင်းသမီး ချော ပိုင်ဖြိုးသုကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ သုသုလေးကတော့ “မီ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့ပြီး သူမရဲ့ နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “Now & Ever” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကာကြီးဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျကာ ရုံပြည့်ရုံလျှံအားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့တာပါ..။ သုသုလေးကတော့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး သူမချစ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပဲ အားထည့်ကာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းလေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မျှဝေလေ့ရှိသူပါ..။ ဒီနေ့ဧပြီလ (၁၇)ရက်နေ့ နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုလေးက “မင်္ဂလာပါရှင်….။ အားလုံးပဲနှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင့်….။ သုသုကတော့ အခုအိမ်မှာနေရတဲ့ ကာလအတွင်း အရင်တုန်းက ဖတ်ချင်လို့ ဝယ်ထားပြီးကာမှ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ အချိန်မရတာကြောင့် မဖတ်ဖြစ်ဘဲ အကြွေးတင်နေတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ကြိုးစားဖတ်နေပါတယ် ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ၃ အုပ်ဖတ်လို့ပြီးသွားပါပြီ.။ (၁). ဆရာကြီးပီမိုးနင်းရဲ့ ‘နေညိုညို’ (၂).ဆရာမသော်တာအေးလဲ့ရဲ့ ‘ကျန်ရစ်မြစ်’ (၃).ဆရာမင်းလူရဲ့ ‘အချစ်သည်သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေသတည်း’။
အခုတော့ ဆရာသိန်းဖေမြင့်ရဲ့ ‘အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ’ ကိုကြိုးစားပြီး စဖတ်ပါတော့မယ်ရှင့် ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဖတ်ဖြစ်ပြီး သုသုကိုလည်း ဖတ်စေချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေရှိရင်လည်း အကြံဉာဏ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ အားပြီး နားရတဲ့ အချိန်လေးမှာ သူမကြိုက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို ဖတ်ကာ အချိန်ကုန်ဆုံးနေပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြစေဖို့ နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်ဖြိုးသုလေးအတွက် နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းပေးရင်း ဖတ်စေချင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ရှိရင်လည်း မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်.။
“ပရိသတျတှအေတှကျ နှဈသဈဆုမှနျကောငျးတောငျးရငျ အကွံဉာဏျလေးတဈခု တောငျးလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု”
ကာရိုကျတာတိုငျးကို စိတျနှဈကာ သရုပျဆောငျတတျတဲ့ မငျးသမီး ခြော ပိုငျဖွိုးသုကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ သုသုလေးကတော့ “မီ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုတှကေို အပွညျ့အဝရရှိခဲ့ပွီး သူမရဲ့ နောကျထပျရုပျရှငျဇာတျကားကွီးဖွဈတဲ့ “Now & Ever” ရုပျရှငျဇာတျကာကွီးဟာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကကြာ ရုံပွညျ့ရုံလြှံအားပေးမှုတှကေို ရရှိခဲ့တာပါ..။ သုသုလေးကတော့ ဒါရိုကျတာဏကွီးနဲ့ အိမျထောငျပွုပွီး သူမခဈြတဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေိုပဲ အားထညျ့ကာ ကွိုးစားလုပျဆောငျနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။
ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျလညျး သူမရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုအကွောငျးလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ မြှဝလေရှေိ့သူပါ..။ ဒီနေ့ဧပွီလ (၁၇)ရကျနေ့ နှဈဆနျး(၁)ရကျနမှေ့ာတော့ ပိုငျဖွိုးသုလေးက “မင်ျဂလာပါရှငျ….။ အားလုံးပဲနှဈသဈမှာ ကနျြးမာပြျောရှငျကွပါစရှေငျ့….။ သုသုကတော့ အခုအိမျမှာနရေတဲ့ ကာလအတှငျး အရငျတုနျးက ဖတျခငျြလို့ ဝယျထားပွီးကာမှ အလုပျတဈဖကျနဲ့မို့ အခြိနျမရတာကွောငျ့ မဖတျဖွဈဘဲ အကွှေးတငျနတေဲ့ စာအုပျလေးတှေ ကွိုးစားဖတျနပေါတယျ ။ အခုလောလောဆယျတော့ ၃ အုပျဖတျလို့ပွီးသှားပါပွီ.။ (၁). ဆရာကွီးပီမိုးနငျးရဲ့ ‘နညေိုညို’ (၂).ဆရာမသျောတာအေးလဲ့ရဲ့ ‘ကနျြရဈမွဈ’ (၃).ဆရာမငျးလူရဲ့ ‘အခဈြသညျသကျတျောရာကြျောရှညျပါစသေတညျး’။
အခုတော့ ဆရာသိနျးဖမွေငျ့ရဲ့ ‘အရှကေ့နဝေနျးထှကျသညျ့ပမာ’ ကိုကွိုးစားပွီး စဖတျပါတော့မယျရှငျ့ ။ ဒီရကျပိုငျးအတှငျး ဖတျဖွဈပွီး သုသုကိုလညျး ဖတျစခေငျြတဲ့ စာအုပျလေးတှရှေိရငျလညျး အကွံဉာဏျပေးသှားကွပါဦးနျော။” ဆိုပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ အားပွီး နားရတဲ့ အခြိနျလေးမှာ သူမကွိုကျတဲ့ စာအုပျလေးတှကေို ဖတျကာ အခြိနျကုနျဆုံးနပွေီး ပရိသတျတှအေတှကျ နှဈသဈမှာ ကနျြးမာပြျောရှငျကွစဖေို့ နှဈသဈဆုမှနျကောငျးလေး တောငျးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ပိုငျဖွိုးသုလေးအတှကျ နှဈသဈဆုမှနျကောငျးလေး တောငျးပေးရငျး ဖတျစခေငျြတဲ့ စာအုပျလေးတှေ ရှိရငျလညျး မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော.။
” ဖြူဖြူထွေးနဲ့အတူ တွဲဖက်ကာကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဟဲဗီးဖြိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် “